Sida loo rogo ama MTS in ProRes si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Sida loo rogo ama MTS in ProRes
Users kuwaas oo doonaya inay wax ka bedel MTS videos la Final Cut Pro sida caadiga ah la kulanaa arrinta incompatibility. Ama aan iyaga edit karaa habsami leh ka dib markii qaar ka mid ah qaadashada loogu soo degida MTS in FCP. Waa maxay sababta? Tan waxa u sabab ah in MTS videos, kuwaas oo aysan fiicneyn Tifaftirayaasha by H.264 codec, waa mid aad u adag in la qaban intii lagu video tafatirka. ProRes, qaab riixo lossy video ah in ay diyaariyeen Apple Inc., waa qaab ku habboon tafatirka siman ee Mac. Sidaas darteed, marka aad hesho badan MTS videos oo aad rabto inaad iyaga wax ka bedel la Final Cut Pro, iMovie, ama Adobe Premier, waxaa dhaanta inay ka faa'iidaystaan ​​codec ka ProRes.
Si loogu badalo MTS in ProRes si fudud oo dhaqso, Video Converter Ultimate for Mac si weyn lagu talinayaa. Barnaamijkan qoreysa oolnimada sare iyo diinta aan xuduud lahayn. Sidaa daraadeed, aad samayn karto diinta Dufcaddii ka AVCHD, MTS, AVI, VOB, MP4, MOV, iyo in ka badan si ay u ProRes ku qasabno of mouse fudud. Halkan sida loo sameeyo.
Free download MTS in ProRes Converter maxkamad version:
1 dar files MTS in MTS in ay ProRes Converter
Guji "+" badhanka si ay u maraan folder ka dibna dooro files MTS aad rabto in aad si loogu badalo. (Fiiro gaar ah: Dufcaddii diinta waxaa lagu taageeray, si aad ku shuban karto in ka badan hal file ah si loo badbaadiyo waqtiga.)
Laakiin haddii aad files MTS ayaa aad fiidiyo, waxaad u baahan tahay inaad xirtaa qalabka aad u Mac ugu horeysay, ka dibna ay maamulaan barnaamijkan. Barnaamijkan wuxuu ku tusi doonaa files fiidiyo aad ee ay interface. Markaas, waxaad dooran kartaa faylasha aad rabto, iyo riix "Load" badhanka si ay u dar.
2 Dooro ProRes sida qaab wax soo saarka
Riix qaab icon ay u Muujin guddiga wax soo saarka. Ka dibna dooro "ayeey" category inaad doorato qaabka aad doonayso inaad ka. Waxaad ka heli doontaa dhawr ProRes qaabab waxaa la siiyaa. Guud ahaan, ProRes ama ProRes Lt waa doorasho ku haboon MTS, M2TS, DV videos toogteen iyaga oo kaamirada. ProRes HQ sida caadiga ah waa filim ku salaysan il warbaahinta.
Talooyin: Ka dib markii doorashada ProRes 422 qaabka caadiga ah ama Lt, aad arki doonaa muddo file Target, xallinta, wuu muujin jiray size file ee dhinaca midigta ee video clip kasta. Haddii loo baahdo, waxaad riixi kartaa icon marsho ku yaal dhinaca midig sare ee qaab nooca aad dooratay si ay ula qabsadaan koobin ee gacanta.
3 bilow diinta MTS in ProRes
Halkaa marka ay marayso, waxaad bedeli kartaa filename wax soo saarka ama jidka soo saarka, haddii aad rabto. Haddii aad dareento in ku qanacsan fursadaha aad, Just ka dhacay button loogu badalo in ay dhaqaajiso MTS file inay diinta ka ProRes. Barnaamijkan waxa aad u waxtar fiican, sababtoo ah waxa uu ka farxiyay la processor iyo GPU (30X dhakhso). Oo uldhexaadda oo ah habka nidaamsan muujin doontaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
Marka dhan laga badalay oo dhameystiran, waxaad heli doontaa ogeysiis pop-up ah. Just guji "Open Folder", idinku waxaad u soontaan ka heli kartaa meesha aad files gediyay ayaa la badbaadiyey.
Beddelaan MTS in AVI : Wondershare Converter MTS kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo MTS in wax audio / video qaab ama qalab iwm
Beddelaan MTS in MP4 ee Mac / Win : Tilmaan-bixiyahan waxa ku bara sidii aad si loogu badalo MTS in MP4, si aad u ciyaari karaa MTS on qaar ka mid ah qalabka ama ciyaaryahano caan ah.
Free download MTS in ProRes Converter: